Vakadzi paRufu Row - Rosie Alfaro
Kushungurudzwa semwana, Mishonga yekushandisa zvinodhaka pa12, Amai pa14, Muurayi pa18
María del Rosio Alfaro, anozivikanwawo saRosie Alfaro, ari mhondi inopomerwa mutsara wekufa muCalifornia nokuda kweJune 15, 1990, kuuraya Autumn Wallace, ane makore 9, muAnaheim, California.
Muna June 1990, Rosie Alfaro aiva nemakore gumi nemasere, mutengesi wemishonga uye amai veviri uye vane pamuviri nemapatya. Akanga agere muimba muAnaheim ane hama yebaba vemapatya, ayo aiva matombo matatu kubva kumba kwaWallace.
Alfaro aiva shamwari yechikoro chesekondari, hanzvadzi yakakura yaApril, uye akagara nemhuri yaWallace panguva yechipiri yekuzvitakura. Zvisinei, muna 1989, April akatanga kutarisa kubva kuAlfaro, kunze kwekuti dzimwe nguva amupe parwendo paakabvunzwa.
Musi waJune 15, 1990, Autumn yaiva kumba kubva kuchikoro kare. Chikoro chaiva ne "zuva rokutanga" uye rakadzika pa2: 35: 00. Amai vaAmai, Linda Wallace, naApril vakanga vari kushanda uye vakanga vasina kutarisirwa kumusha kusvika kunenge muna 5 masikati. Autumn yakazvifadza pacheka mapepa emapepa.
Pazuva rimwe chete, Rosie Alfaro akanga achishingaira kutenga cocaine ne heroin uye achikwirira. Chikwata chake chekutanga chakanga chiri mhiri kwe11: 00 uye ne2: 00 masikati, zvakare akanga asina mari nemishonga. Shamwari, Antonio Reynoso, uyo akanga asunungurwa kubva mujeri zuva rakapfuura, akabvuma kugoverana mishonga yake pamwe naye kana akabvumirana kugovana naye netare. Apo madhiragi ake akabuda, Alfaro akasarudza kuti aizobvuta imba yaWallaces kuti awane mari yemishonga yakawanda.
Alfaro akaudza Reynoso kuti aimbogara nemhuri yaWallace uye kuti akanga asiya katepiyo kasekodha rekodhi mumba uye aizotengesa kwaari achichinjana nemishonga. Alfaro, Reynoso, murume asingazivikanwi, uye mwana weAlfaro muduku kuna vose vakaenda kumba kwaWallace. Varume nemwana vakamirira nemotokari apo Alfaro akaenda kumba.
Autumn akapindura musuo uye akaziva Alfaro seshamwari yehanzvadzi dzake. Alfaro akakumbira kana aigona kushandisa imba yekugara uye Autumn achimurega apinde mukati. Alfaro akakwanisa kutora banga kubva padhiki rekicheni ndokubva aita coaxed Autumn muimba yekugezera. Ikoko akarova Autumn kudarika makumi mashanu kumashure, chifuva, uye musoro.
Aine Autumn kunze, akaenderera mberi achipamba imba yemagetsi ezvimwe, magetsi, uye zvipfeko.
Alfaro akazobvuma kuti aiziva kuti Autumn ingange iri pamba pega uye iye aizivawo kuti Autumn inogona kumuzivisa kumapurisa.
April Wallace akadzoka kumba nenguva dze5: 15 masikati uye akawana mukova weimba usina kuvhurwa. Paakapinda pamba akaona kuti imba yacho yakanga yakazara uye kuti pane zvimwe zvinhu zvakashaikwa. Akadanidzira kuti Autumn, asi kwakanga kusina mhinduro, saka akabva uye akayambuka mumugwagwa kuenda kuimba yomuvakidzani kuzomirira amai vake kuti vadzoke kumba.
Linda Wallace akasvika kumba akakomberedza na5: 40 masikati uye akaudzwa kuti imba yakanga yave yakasungwa uye kuti Autumn yakanga isipo. Akapinda mumba kuti atsvake Autumn uye akamuwana afa muchengeti rekumusoro.
Vavakidzani vakaudza mapurisa kuti vakaona Monte Carlo brownish yakamira paimba yaWallace uye kuti varume vaviri, mumwe akabata mwana muduku, vakanga vamire panze yemotokari.
Mapurisa anoongorora mapurisa akakwanisa kuwana zvinyorwa zvinyorwa kubva kumusha weWallace unoenderana neAlfaro.
Alfaro akaunzwa kuti ave nekubvunzurudza uye akaramba kusabatanidzwa chero kupi zvako mukuuraya.
Pane imwe nguva mushure mekuponda, Alfaro akabvunza shamwari kana aigona kusiya bhegi rekupfeka mumba make. Alfaro akaonana neshamwari gare gare, achikumbira kuti abve muhomwe kunze kwemusha wake nokuti akanga achienda kuMexico mangwanani akatevera, asi haana kumbozviratidza.
Vatsvakurudzi vakawana nezvehomwe uye pakuongorora vakawana mapepa maviri eApril ayo akanga aonekwa sebiwa uye pamwe chete nehomwe yeAlfaro's tennis shoes. Chirongwa cheAlfaro chavasungwa chakabudiswa uye akaunzwa kuti apindure mibvunzo zvakare.
Mumusangano wevhidhiyo wakapera maawa anopfuura mana, Alfaro akareurura kuti iye oga ndiye akauraya Autumn ndokubva avhara imba.
Alfaro akasungwa uye akapomerwa mhosva yekuuraya uye kuuraya .
Muna March 1992 jeri rakawana Rosie Alfaro ane mhosva yekuponda kweAustumn Wallace. Dare rakapedza vhiki mbiri.
Kutongerwa - Kutanga Kwekutanga Kutongwa
Munguva yekutanga chirango chechikamu chekutongwa kwevamwe vana veAlfaro vakapupura kuti akakurira mumusha une chisimba uye kuti baba vake vakanga vakadhakwa vakashandisa amai vake. Vakapupura zvakare kuti Alfaro aishandisa zvinodhaka pakutanga kwechechi yechitanhatu uye akasiya chikoro mukirasi yechinomwe, panguva iyo akatanga kuisa jira zuva nezuva seanenge 50 mabhora (musanganiswa we heroin uye cocaine.)
Amai vaAlfaro, Sylvia Alfaro, vakapupurira kuti murume wake akanga ari doro uye aiwanzozvirova iye oga naRosie pamberi pevamwe vana mumhuri, uye vakarasa mhuri yacho kubva pamba panguva yekudhakwa. Akataura nezvekushandisa kwemwanasikana wake pakutanga uye kusagona kwake kusiya. Akati wakati ava nemakore gumi nemana, Rosie akanga ane pamuviri nemwana wake wokutanga. Munguva imwecheteyo baba vaRosie vakasiya mhuri.
Rosie Alfaro akatorawo chibvumirano ndokupupurira nezvehupenyu hwake husina mufaro, baba vake vane chisimba, rusarura rwemadzinza avo rwakatambura kuchikoro uye pamusoro pokusakwanisa kubuda mumishonga. Akarondedzera kuchema kwake pamusoro pekuponda kweAustin Wallace, achiti "takatora hupenyu hwako husina mhosva."
Nekutaura kwe "isu" dare rakapa mutongo kuti akanga azarura mukova wekupupurirana pamusoro pezvakaitika munguva yekupara mhosva kubva apo Alfaro aigara achiomerera kuti aite oga.
Munguva yekupindurirwa, Alfaro akapupura kuti akauraya kuuraya Autumn, asi akaita saizvozvo paanomanikidzwa nemurume wechipiri asina kuziva ainge auya naye uye Reynoso. Akataura kune murume se "Beto" asi akaramba kupa chero ruzivo rwekuziva kwake.
Akapupurira zvakare kuti akanga akakwirira pamishonga uye "akabuda mumusoro make" nguva pfupi vasati vasvika kumusha weWallace. Panguva ino akati haazive Autumn yaizova kumba uye akanga asina kumbofunga kumukuvadza.
Akataura kuti apo "Beto," uyo aivawo akakwirira pamishonga yemishonga, akaona kuti Autumn yakanga iri mumba iye akatsamwa ndokuisa banga kuna Alfaro uye akatyisidzira kumuuraya iye nemwana wake kana asina kubaya Autumn. Vakati iye akabaya Autumn kashoma, asi akati "Beto" inofanira kunge yakaita zvinosara zvekurohwa maronda.
Alfaro akati apo paakaburuka kubva kumusoro kwake, akanga asingatendi kuti Autumn yakanga yafa.
Muchuchisi akabvunza Alfaro nezvemashoko pamusoro pekuzivikanwa kwe "Beto" ayo akanga ataurira nyanzvi yehutano hwepfungwa iyo yakamuongorora pakukumbira kwemagweta ake.
Akapupura kuti pakutanga akaudza chiremba kuti murume asina kuziva aiva shamwari yababa vake uye kuti zita rake raiva Miguel. Akabva amuudza kuti zita romurume uyu raiva "Beto" uye akamuona mumufananidzo uye akati akanga ane zita remukadzi pamatsipa ake.
Panguva yekubvunzurudzwa kweAlfaro naReynoso muzvidziviriro vakaratidza kuti kunyatsozivikanwa kwe "Beto" kwaiva Robert Frias Gonzales, ane zita rainzi Beto. Zvisinei, mukutsvaga hurumende yakabvunza Robert Gonzales uyo akaramba kuti ave nechokuita nehutongerwo hweAustumn Wallace uye uyo asinawo kutarisa zvose sezvakaitwa naAlfaro pamufananidzo se "Beto."
Asingakwanisi kuziva kuti Beto aiva ani, jeri pamutambo wekutanga wekutongwa kwechikwata chakanga chakakundikana kubvumirana pamutsara uye dare rekutongwa rakaziviswa pamutemo.
Chechipiri Chechipiri Chikamu Chekuita
Chirango chezvekare chakaitwa muna April 1992 pamberi pejeri idzva. Zvizhinji zvezvapupu zvakafanana izvo zvakapupura munguva yekutanga chirango, zvakapupurira zvekare, kunyange zvazvo panguva ino Rosie Alfaro akaramba akanyarara.
Mukuwedzera kune uchapupu hwepakutanga, mutongi wacho akadana imwe nyanzvi yemhosva, Marc Taylor, uyo akapupurira kuti mushure mekuongorora humwe humwe uchapupu, shangu dzakapetwa dzakawanikwa mukati uye kunze kweimba hazvina kufanana neAlfaro shangu.
Mutevedzeri wenhepfenyuro mujeri reAllow County akapupura nezvekuzvidzivirira pamusoro pemunhu waakaona uyo akafanana nemufananidzo waAlfaro ainge ataura se "Beto" kupinda muBaramaro yebhuruu yakamira mumugwagwa kubva mujeri guru.
Dr Consuelo Edwards uyo aiva nyanzvi yehutano hwemapfungwa iyo Alfaro akambotaurira nezve "Beto" kumumanikidza kuti aponese Autumn zvakare akapupurira zvekuzvidzivirira. Akataura kuti kushandiswa kweAlfaro kwepfungwa kwakange kuri kumucheto , uye kuti aiva neIQ ye 78 uye akaremara kudzidza apo akawedzererwa nekutambudzika kwake kwehuduku. Akamurondedzera semuteveri.
Mukutsvaga, muchuchisi aive nevashandi vejeri vakawanda veAllow County vanopupurira pamusoro pehutsika hweAlfaro mujeri nemashoko akataurwa kuti vakanga vanzwa kutaura kwake kune mumwe musungwa.
Vanopupurira kumunzwa achiti, "Ndiri munhu akaora mwoyo anotora zvinhu kune vanhu, uye ndinofanira kudzidza kurarama nazvo," uye "Handizokwanisi kuita izvi zvakare. Ini ndichandova kutonhora ikozvino ndinongoda kutora izvi. "
Muongorori weAlor County Robert Harper akapupura kuti Robert Frias Gonzales, uyo akazvidzivirira akati ainzi "Beto" uye murume wechipiri aine Alfaro pazuva rekuponda, aiva nekatinha yebhokisi pamutsipa wake kwete zita remukadzi, izvo zvakaitwa naAlfaro yakatsanangurwa.
Musi waJuly 14, 1992, yechipiri chirango chechikamu jury akatongerwa Rosie Alfaro kufa.
MunaAugust 2007, Supreme Court of California yakaramba chikumbiro chaRosie Alfaro chekugara kwekuuraya.
María del Rosio Alfaro ndiye mukadzi wokutanga akatongerwa kufa muAre Orange County.
Nhoroondo yeAmber Frey, Ex-Mistress of Murderer Scott Peterson
Georgia - Kodzero dzeVakamanikidzwa
Caroline Young Akauraya Vabereki Vake Vokutsiva
Zvisingazivikanwi Uchapupu: The Scott Peterson Trial
Unofanirwa Mumiririri Murevereri weMakore gumi
Kunzwisisa Polypropylene Plastics
Barbara Walters Honours 100 Vakadzi
Iwe Unofanirwa Kubatana neChikamu Kuti Uwane USGA Handicap Index?
Chii Chinoitika Muhupenyu Chaicho Apo Mercury In Retrograde?
Best Children's Christmas Books pamusoro pekuzvarwa kwaJesu
Jesu Anochenesa Temberi yeMari Vashanduri
Nyukemu Kuedza Photo Gallery
Kuisa Verb Isati Yambo
Nekuda kwekushandiswa kweChirungu chekushandiswa kweChirungu cheChirungu chekuita
Rimwe Kutungamirira Music Videos
Biography ye Former NASA Astronaut José Hernández
Muenzaniso wekukura nekuchikoro chekufanisa uye nei ichi nyaya
Zvikonzero zveMotokisi Haisi Kutanga
Gettysburg College GPA, SAT uye ACT Data
Minyengetero kuna St. Philip Neri yeZuva rega revhiki
Iro Marwadzo Api! Nzira Yokushandisa Shanduro yeSpain 'Doler'